खुसीको दिन | पुण्य खरेल
कथा पुण्य खरेल December 1, 2017, 5:08 pm
“हेर ! घरबाट आउँदा पनि अनेकन विवाद र झगडा प¥यो । भाइले पनि औंला ठड्यायो । बाबुआमाले पनि तिमीलाई लिएर हिंड्दा छोरै होइन जतिकै गरे ... अलिक सोच्नु पर्छ ।”
“के सोच्नु ? म त सोझा बाबुआमाका कुरा सुनेकी, सोझो गरीबनी खाएकी मान्छे ! आफ्नो जीउ–ज्यानभन्दा प्यारो त केही हुँदैन ... मैले त आफ्नो ज्यान तपाईंलाई सुम्पिएको ठानेकी छु, त्यति हो ।”
“के नामर्द कुरा ग¥या ? त्यही तपाईंको हाकिमका कुरा मान्नु, त्यसलाई सुम्सुम्याउनु भनेको तपाईंले ? तपाईंका जागिरका लागि मैले ...? कि के ? मलाई चाहिं भोलि नै विदा दिनुहोस् ! म यो सहन्न । एक सहन्न, दुई ... तीन सहन्न !”
“कस्तो निहुँ खोज्ने कुरा गरेकी नि फेरि ! तिम्रो इज्जतको ख्याल मलाई चाहिं छैन भन्ने बुझ्यौ कि क्या हो ? म आफैं तिमीलाई त्यस्तो ... तिमीले के शङ्का गरेकी ? दुई–दुईटा छोराछोरी भए, अझै हाम्रो चिनजान हुन बाँकी नै छ र ! अलिकति त पुर्खाको रगत छ नि यी दुब्ला पाखुरामा । तर सस्याना कुरामा जोगिएर आफू पनि जोगिऊँ र जागिर पनि जोगाउँ भन्नेसम्म कुरा गरेको नि !”
“राख्नोस् तपाईंको पैसा !” चियासम्म खुवाउन चाहिं जागिर नभए पनि सक्छौं । अलिलि त हिङ बाँधेकै टालो हौं हामी पनि” भन्दै अम्बिका भान्साकोठातिर गइन् । हाकिम पनि भान्साकोठातिरै पस्यो । त्यतिबेला नै बाहिर कोही बोलेकोले बाहिर निस्कियो । फेरि एकै छिनमा भित्रै पस्यो । उसले अम्बिकालाई भन्यो– “अम्बिका ! तिमीलाई केही आपत्ति भए मलाई भन्नू, तर म आउँदा मुख चाहिं न बिगार्नू है ! मन पर्दैन भने म आउँदिन ! तर मलाई चाहि. घरको सम्झना आइरहन्छ । श्रीमतीको, घरको नियास्रो मेटाउन आइरहन मनपर्छ । मेरी श्रीमती पनि तिमी जस्तै ! ... अनुहार रिसाएको जस्तो गरे पनि भित्रकी चाहिं दयालु ।”
“... .... ....” दारा किटिन् अम्बिकाले ।
“... ....... ....” अम्बिकाले यो पनि खपिन् ।
“हाम्रो हाकिम यता आउनुभएको थियो ? प्रष्ट भन न ! त्यो आज पनि यता आएको थियो भने म अहिले गएर त्यसलाई दुई टुक्रा पार्छु । त्यो स्साले ! कसकसका छोरीलाई जागिर खुवाउने भनेर ... दुनियाँका छोरी बिगारेर कस्तो बिजेती ... भन त ! आज आएको थियो त्यो यता ?” गएर शिरानीमा राखेको उसको सिरूपाते खुकुरी झिक्छ र दापबाट निकाल्छ ।
अम्बिका उसलाई समाउँछे– “भैगो ! अहिले कतै जानु पर्दैन । यो तुजुक पनि देखाउनु पर्दैन । नारीमा ताकत छ भने देखाउनू ! त्योे भोलि यहीं आउँछ । भोलि बिहान आउँछु भनेको छ । कस्तो रण्डो ! आफ्ना मुनिका कर्मचारीका डेराडेरा धाउने । लोग्ने मान्छे नभएका बेलामा बिस्तरा, भान्सा कोठामा आफ्नै घर–जहान झैं पस्छ । सक्नु हुन्छ भने मलाई मद्दत गर्नू, नत्र भने भोलि बिहान म एक्लै त्यसलाई ठिक गर्छु ...”
भोलिपल्ट नौ बज्न पाएकै थिएन– “हाकिमको हात च्याट्टै छिनाएको छ अरे ! अम्बिका भन्ने उसकै कार्यालयको खर्दारकी स्वास्नीले खुकुरीले छिनाइ अरे त्यस राँगालाई ! ... बल्ल मर्दका फेला परेछ त्यो राँगो ...” यो हल्ला स्यालको हुइँया भएर क्षणभरमै त्यो सानो शहरभरि फैलियो । मानौं, कुनै हल्लाको आँधी आएको हो । हाटको दिन परेकोले पनि हल्लालाई मल लाग्यो ।
“मेरो आङ त अब नाङ्गो हुँदैहुँदैन । लुगाले मात्र ढाक्छ र मान्छेको नाङ्गोपन ? त्यस किच्चकले मलाई मलमलका लुगामा पनि नाङ्गो पार्ने प्रयत्न गरेथ्यो, तर सकेन । कोहीकोही मान्छे मूल्यवान लुगा लगाए पनि नाङ्गै हुन्छन् । कोही बिना लुगाफाटो पनि जरझुट्ट हुन्छन् । सुर्ताउनु पर्दैन तपाईंले रत्तिभर पनि । म भएँ ! ... लु त हेरौं ! कसरी जान्छ तपाईंको जागिर ? त्यसमाथि भएन जागिरै नभए पनि हाम्रा पितापुर्खाले राम्ररी निर्वाह गरेकै हुन् नि !”
सावित्री जस्ती देखिई अम्बिका । उसले अझै भनी– “मलाई त आजसम्म यस्तो रमाइलो दिन आएकै थिएन । मलाई कसैले सबैभन्दा खुसीको दिनको वारेमा सोधेमा यही दिन सबैभन्दा खुसीको दिन भन्ने छु । लङ्गडो ठानेकी थिएँ मैले आइमाईलाई, तर मलाई थाहा भयो, हामी पनि सक्ता रहेछौं अन्यायको बिरुद्धमा लडाइँ गर्न । इज्जतका निम्ति लडाईंमा उत्रिने मान्छेको भीड देखेर म त अत्यन्त खुसी भएकी छु ...”